Police ka Kenya oo Ka shakiyey wada shaqeeynta al-shabaab iyo MRC - Wargeyska Faafiye
Taliyaha Guud ee Boliska Kenya, Jeneral David Kimayo ayaa sheegay in Kooxda isku magacowda The Mombasa Republican Council (MRC) xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin Alshabaab oo iyagu dagaallo ka wada gudaha dalalka Somalia iyo Kenya.
“Labada Urur ee Alshabaab iyo MRC waxay haatan u wada shaqeeyaan si aad isugu dhow” ayuu David Kimayo ku sheegay qoraal uu soo saaray.
Hadalkiisa ayaa soo baxay hal toddobaad kadib, markii ay Diyaaradaha Dagaalka ee Maraykanka duqeyn ku dileen Amiirkii Alshabaab, Axmed Cabdi Godane.
Taliyaha Guud ee Boliska Kenya, waxa kaloo uu ku eedeeyey inay Alshabaab iyo MRC ku lug lahaayeen weeraradii dhowr bilood ka hor ka dhacay Degmadda Lamu iyo Gobalka Tana River ee dalka Kenya, laguna dilay in ka badan 100-qof.
Kooxda MRC ayaa waxaa asaastay Muslimiinta Kenya ee ku nool Goballadda Xeebta, gaar ahaan Mombasa, Lamu iyo kuwo ku xeeran, mana jiraan caddaymo muujinaya Eedeymaha loo soo jeediyey.
Hadalka Taliyaha Guud ee Boliska Kenya, Jeneral David Kiamiyo ayaa ku soo beegmay iyadoo ay bandow habeenimo saaran yihiin Degmooyin ku yaalla W/bari iyo Goballadda Xeebta ee dalka Kenya, iyo iyadoo ay labo toddobaad ka harsan tahay sannad-guuraddii Koowaad ee ka soo wareegtay markii ay Dagaalyahanno ka tirsan Alshabaab weerareen Xarumaha laga dukaamaysto ee Westgate Mall ee magaalladda Nairobi, laguna dilay 69-qof.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsShir dhibaatada warbaahinta looga hadlayo.NATO admits killing civilians in strike.Uhuru Kenyatta oo ku dhawaaqay qaar kamid ah Golahiisa wasiirada.Madaxa arrimaha debadda ee EU oo la kulantay Morsi.Six Somalis killed in Mogadishu mortar attack